Kutonhora uye kupisa mabasa makuru: chii chavanofanotaura chakasiyana kubva kune mumwe nemumwe? | Kudzidziswa Kwekuziva
Izvo zvava kunyatso kuzivikanwa uye kuzivikanwa kuti makuru mabasa ane hukama zvakanyanya (pamwechete nehungwaru) kune akawanda mativi ehupenyu hwedu: isu tine dhata maererano nekufungidzira kwavo maererano ne kuita kwedzidzo, to creativeness, kugona kuverenga uye nzwisiso yezvinyorwa, pa hunyanzvi hwemasvomhu, to mutauro uye zvosehasha.
Kazhinji, zvisinei, mukuongorora zvinoitika zvemabasa epamusoro pazvinhu zvakakosha zvehupenyu hwedu, kutsvagisa kunotarisa zvakanyanya pane izvo zvinonzi kutonhora Executive mabasa, ndiko kuti, kunyanya "kuziva" uye kusununguka kubva pamanzwiro (semuenzaniso, iyo kushanda ndangariro, kugadzirisa kushanduka uye kudzivisa); zvakati wandei zvinotaurwa pane izvo zvinonzi zvinopisa masimba emabasa, ndiko kuti, izvo zvine hanya nezvinangwa zvinotungamira zvisarudzo zvedu (kunyanya kana zvakazara nemanzwiro uye zvinokurudzira zvinhu), kudzora manzwiro, kutsvaga kwekugutsikana uye kugona kuzvidzora .
Muna 2018, Poon saka afunga kuyedza boka revachiri kuyaruka zvine chekuita nekudzidza kuchikoro uye nekuremekedza kugadzikana kwavo kwepfungwa uye kugona kuchinjika; panguva imwecheteyo, ivo vayaruka vakaiswa pasi pekuongororwa kwemabasa makuru, ese anotonhora uye anopisa, kuburikidza nebhatiri rakasarudzika.
Chii chakabuda mukutsvaga?
Kunyangwe zvakataurwa nemunyori mune yake yega chinyorwa, bvunzo dzese dzakashandiswa kuongorora kutonhora (kutarisa kwekutarisira, kushanda memory memory, kugona kugadzirisa uye kuronga) uye kupisa (kuita zvisarudzo) zvaive zvishoma kana kwete zvachose zvakabatana nemumwe (iyo yepamusoro kuwirirana, uye imwe chete kusvika padanho rehuwandu hwehuwandu, yaingova r = 0,18!); izvi zvinotibvumidza kufungidzira, zvinoenderana nezvakataurwa naMiyake nevamwe vake, kuti izvo zvakasiyana zvikamu zvehutongi mabasa zvinokanganisika kubva kune mumwe nemumwe.
Chinhu chinonakidza kwazvo ndechekuti, mambure epesvedzero yedanho rehungwaru, kutonhora Executive mabasa vaifungidzira nezve kuita kwedzidzo apo cordial Executive mabasa yakaratidza kuva fungidziro yekugadziriswa kwepfungwa.
Iwo anotonhora uye anopisa masimba emabasa, nepo achishanda synergistically, ipapo anoita kunge maviri akasiyana anovaka uye aine kukosha kwakasiyana maererano neakasiyana mamiriro ehupenyu.
Chekupedzisira, imwe data inokosha inokoshesa maitiro ezvibodzwa mumiyedzo inoshandiswa mukutsvaga uku, kubva pamakore gumi nemaviri kusvika gumi nemanomwe ekuberekwa: iyo remuromo rinoshanda memory inoratidza kukura kuri kuenderera nezera (muhuwandu hwakatariswa mune iyi tsvagiridzo), zvakare kuratidza kuwedzera nekukurumidza kunosvika makore gumi nemashanu ekuberekwa; zvakare iyo kutarisa kwekutarisa inoonekwa mukukura kusingaperi muboka iri rezera; ipapo kuchenjera kwekuchinja zvinoita sekunge ichiwedzera ichienderera kusvika pamakore gumi nematanhatu; zvakafanana, kugona ku chinovhiringidza inoratidza kukwira kwakadzika kubva pa13 kusvika pa16; ipapo urongwapakupedzisira, zvinoratidza kukura kunopfuurira nezera, zvichiratidza zvakadaro huwandu hwekuwedzera kutenderera makore gumi nemanomwe ekuberekwa.
Zvakasiyana zvakanyanya ndiwo maitiro e cordial Executive mabasa kubvira maitiro kubva pamakore gumi nemaviri kusvika gumi nemanomwe ezera rakaumbwa sebhero (kana inverted "U"); mune mamwe mazwi, makore angangoita gumi nemana kusvika gumi nemashanu ekuberekwa, zviito zvakaipisisa zvinoonekwa (mune iyi ongororo) zvichienzaniswa nemakore apfuura neanotevera; zvakanyatsonaka, muboka rezera iri pane hukuru hwekukanganisa uye kutsvaga kwekugutsikana kudiki asi nekukasira (zvichienzaniswa neidzo dziri kure munguva asi dzakakura).
Nezve kutonhora Executive mabasa, kuvharidzira, kushanda ndangariro uye kugona kugadzirisa kunoonekwa kunge kunokura pakutanga pane kuronga; saka zvinogona kufungidzirwa kuti iyo yekutanga (yakanyanya kukosha) inoumba hwaro hwekuvandudzwa kweiyo yekupedzisira (yechinhu chepamusoro).
Zvichienzaniswa nemabasa epamusoro anopisa, akacherechedzwa akachinjika "U" maitiro anogona kutsanangura kuwedzera kwehunhu hwehunhu hunowanzoonekwa mukuyaruka.
Kunyanya kazhinji, bvunzo dzechando Executive mabasa uye iwo eanopisa masimba emabasa anoita kunge anoyera zvakasiyana kuvaka: iyo yekutanga, muchokwadi, inoita kunge inoenderana zvakanyanya nekuzadzikiswa kwezvimwe zvinonzwisisika zvinangwa (semuenzaniso, kuita kwechikoro), aya ekupedzisira anowirirana nezvimwe zvinangwa zvemagariro uye zvemanzwiro.
Chiono chakanyatsobatanidzwa chemabatiro emabasa saka chakakosha, kazhinji kacho chisina kuenzana chete pazvinhu zvinowanda chando.
Ndeapi makuru mabasa?
"Programming" Executive mabasa: mhedzisiro ye kukodha pakuronga uye kuvharidzira kukireshi
Kutamba mimhanzi kunoita kuti uve nenjere here?
Iwo mabasa makuru anotungamira kuita kwechikoro
Executive mabasa uye utsinye: hukama hupi?
Hukama pakati pehutungamiriri mabasa uye mutauro muzera rekuchikoro
Hukama huri pakati pekugadzira, huchenjeri nemabasa epamusoro
"Kutamba" nevakuru mabasa. Nekunakidzwa unozoita zvirinani
Maitiro ekuongorora mabasa makuru: bvunzo dzakashandiswa
Miyake, A., Friedman, NP, Emerson, MJ, Witzki, AH, Howerter, A., & Wager, TD (2000). Kubatana uye kusiyana kwemabasa ekumisikidza uye nemipiro yavo kumabasa akaomarara e "kumberi kwemukati". Kuziva kwepfungwa, 41(1), 49-100.
Poon, K. (2018). Hot uye inotonhorera Executive mabasa mukuyaruka: budiriro uye mipiro kune yakakosha budiriro mhedzisiro. Frontiers mune zvepfungwa, 8, 2311.
mabasa makuru, cordial Executive mabasa, masimba ekuita uye kugadzirisa kwepfungwa, mabasa epamusoro uye kuita kwedzidzo, kutonhora Executive mabasa, kutonhora uye kupisa mabasa epamusoro
Kutonhora uye kupisa mabasa makuru: chii chavanofanotaura chakasiyana kubva kune mumwe nemumwe?2021-08-232021-08-23http://www.trainingcognitivo.it/wp-content/uploads/2017/08/nuovologo_87e9aa904327d53301f73f9191e17e49.pngKudzidziswa kwekuzivahttps://www.trainingcognitivo.it/wp-content/uploads/2021/08/funzioni-esecutive-fredde-e-calde.-cosa-predicono-di-diverso-tra-loro.jpg200px200px
Hukama huri pakati pehuchenjeri hwemvura nemabasa makuruZvinyorwa, Executive Mabasa, Executive Mabasa, Njere
Matekiniki Ekusimudzira Kudzidza: Ndeapi Chaizvo Anobudirira? Chikamu 2Kudzidza, Zvinyorwa, Ndangariro, Maitiro Ekudzidza, Neuropsychology